Amandla angatshela okuningi ngendoda, hhayi ngaphandle kwesizathu izandla ezilungiselelwe kahle eziheha ukunakwa okukhethekile kwabangane ngazo zonke izikhathi. Ungayinaki umuthi, ikakhulukazi ngoba lokhu kuyindlela elula engathathi isikhathi esiningi, kodwa idinga ukuhlala njalo. Uma ungenaso isikhathi futhi ufisa ukuvakashela ubuhle be-salon, ungenza u-manicure ekhaya ngosizo lwesethi yomuthi ejwayelekile. Kodwa-ke umbuzo uphakama, kanjani ukukhetha isethi yokuhlunga umzimba? Ake sizame ukuyihlola.
Namuhla, izitolo nama-salon zimelela ububanzi obukhulu bezesekeli zokwenza umuthi, ngakho kunzima ukukhetha isethi kwabesifazane abaningi. Ngaphambi kokwenza ukhetho futhi uthenge isethi yokwenza umuthi, kudingeka uthathe isinqumo ukuthi yini oyifunayo ukuthenga le kit nokuthi uzoyisebenzisa kanjani. Isibonelo, i-manicure yobuchwepheshe idinga ama-kits aqeqeshiwe afanelekayo, intengo ephakeme kakhulu ngenxa yekhwalithi enhle yezinsimbi.
Uma kwenzeka uthatha isinqumo sokuthenga isethi yomuntu yokusetshenziswa ekhaya, kufanele unqume ukuthi yimaphi amathuluzi okudingayo. Izindleko zokuqasha ngokuvamile zixhomeke ukuthi zingaki nokuthi yiziphi izesekeli eziqukethe. Ngakho-ke, akusizi ngalutho ukukhokhela amaholo amakhulu, uma esikhathini esizayo ngeke usebenzise amathuluzi amaningi.
Ngokungeziwe ekukhetheni izesekeli ezithile zokugcoba, uma uthenga i-kit, kufanele wakhe phezu kwezikhonkwane zakho. Lokhu kubaluleke kakhulu, isibonelo, uma ukhetha amafayela we-nail, ikakhulukazi ngokupuniza okukhulu noma okuncane.
Amasethi wamanje anika izinsimbi eziningi zezici ezahlukene.
Isidingo esikhulu sokusetshenziswa ekhaya sijabulela "ama-prism amahlanu". Lezi yizinkampani, ezifaka izinto ezinhlanu, eziningi ezidingekayo ekwenzeni umuthi wamamateur. Inani elincane lokusetha komuntu kufanele lifake ifayela le-nails, izikrini, ama-tweezers, ama-nippers, ama-scraper.
Izimpawu zamathuluzi okugcoba umzimba, okudingeka anakekele
Ifayela le-nails. Uma ukhetha ifayela, kufanele ulandele isakhiwo sezipikili zakho. Uma ungangabazi ngokungahambi kahle kwefayela le-nail, thintana nomuntu onolwazi oluthola ulwazi oluthola iseluleko. Khumbula ukuthi ngezipikili ezinzima, kungcono ukusebenzisa amafayela we-nail esensimbi, nezintambo ezifakwe efolini.
Izikhali zezinkwa. Uma uthengisa izikhali, ungabi nobuvila ukuze uhlole ukuthi usika kanjani. Hlola ukuthi zibukhali kangakanani, ngokwesibonelo, ngokusika izinwele. Cabanga ngamasu we-scissors. Akufanele kube yiyiphi i-deformation, ngaphandle kwalokho awukwazi kahle futhi ngokuqondile ukusika izipikili zakho.
Ama-Tweezers. Uma ukhetha ukudlala, uqondiswe ukuthi ubamba kanjani izinwele. Khumbula ukuthi amathiphu okugcoba akufanele abe abukhali kakhulu, kungenjalo uzokhipha nje izinwele ngaphandle kokuwadonsa. Futhi phawula ukuthi kungcono yini ukubamba izinkinobho ozikhethile.
Cuticle nippers. Abaqambi bekhwalithi kufanele benze ngensimbi enhle, okuzobenza bahambe kalula. Awudingi ukubeka umzamo omkhulu ekusebenzeni nayo. Khokha ngokukhethekile amathiphu wabakwa-cutters, ukuze angaboni kakhulu, kungenjalo amanxeba angadingekile angeke agwenywe.
I-scraper noma i-manicure scapula. Ithuluzi lekhwalithi akufanele ligobe. Uma ibukhali kakhulu, uzolimaza i-nail, uma ihluleka kakhulu, awukwazi ukusebenza nayo ngokuvamile. I-scraper iyithuluzi elihlangene lamabili: elinye linye lisetshenziselwa ukuhambisa isikhumba nxazonke kwesikhali, enye isetshenziselwa ukukhipha.
Uma wenze isinqumo ngemuva kokuthanda isethi ye-amateur enesixha esikhulu, kungcono kube ngcono ukusetha isethi yobuchwepheshe.
Qaphela izintambo okuthiwa "umgwaqo". Zihlanganisa inombolo encane yamathuluzi okugcoba, kodwa kwanele ukulungisa izipikili ngokushesha endaweni ehlelekile, ngokwesibonelo, emgwaqweni.
Indlela yokwenza i-gradient ezipikili ezinama-gel-varnish
Izipikili ezinhle nemidwebo ezithuthukisiwe kuzo
Eyelashes esinyene futhi ende
Isobho se-Milk ne-brynza
Umlando wekati onamehlo amaningi
U-Nikita Dzhigurda wachaza ukuthi kungani i-Ukraine inganikezwa umbuso wamahhala
Inqubo yokujwayela ingane esikoleni
Umshado omuhle ngesitayela sekhulu le-XVII-XVIII
Izibhamu ku-kefir: kanjani ukupheka ekhaya ukudla okuhlwabusayo futhi okumnandi
Ushizi nama-inkukhu amabhola ngeminqumo
Iwayini elivela ema-apula ekhaya: zokupheka ezilula-ngesinyathelo
Indlela yokunakekela izinwele zakho?